Uyibhala njani inoveli: inkqubo yoxwebhu | Uncwadi lwangoku
Bambalwa abakholelwa ukuba njenge inoveli Yiyo umsebenzi weentsomi, yonke into ekuzo kufuneka ivela ekucingeni.
Nangona kunjalo inyani yile kude kakhulu nengxelo enjalo.
Owona msebenzi uphambili wentelekelelo kwinkqubo yokudala ibali ayisiyonto yimbi ngaphandle kwalonto tshintsha kwaye uhlanganise okwaziwayo ukuze ufumane into entsha. Umntu akanakuthelekelela into engekhoyo. Ngaphakathi ezantsi, yonke into inentsholongwane yayo kumava ayo, kubantu abaziwayo, kwiindawo ezityelelweyo nakwimizuzwana yokuphila, ekucacileyo ukuba yenziwa kumila kumbi kodwa inesiseko sayo kwihlabathi lokwenyani.
Kungenxa yoko le nto amaxwebhu ebonakala ebalulekile kwisiphumo somsebenzi esinokuthenjwa. Akukho mntu uvelisa umxholo wesixeko, okanye umxholo welizwe. Unokwenza isixeko esithile okanye intsimi ethile, ewe, kodwa uya kuyenza ngokusekwe kwezo sele usazi. Ngesi sizathu, izinto esizenzileyo zixhomekeke kulwazi lwethu, kwaye ngakumbi kwezi, kokukhona kuya kutyeba ngakumbi yile siyiyilileyo Eyona nto iphambili ekubhalwe kuyo.
Kukho izinto ezininzi ezifuna uxwebhu kwinoveliUmzekelo, imeko apho kwenzeka khona (kwendalo / edolophini), amaxesha ahlukeneyo embali apho inokubekwa khona, imiba yezobugcisa yomsebenzi wabalinganiswa, abalinganiswa ngokwabo ukuba ngabantu bembali, izixeko ngokwazo imeko yokuba izixeko ezithile, kunye nezinto ezininzi, iinkqubo okanye izakhiwo ezinokubonakala ngexesha elithile ebalini lethu.
Ngethamsanqa kuthi, namhlanje iitekhnoloji zenze ukuba zifumaneke izixhobo ezininzi esivumela ukuba siqhube lo msebenzi kwaye nazi ezinye zeengcebiso:
Ezinye iinoveli ngomxholo ofanayo.
Cinezela: amaphephandaba kunye neemagazini ezizodwa.
Iincwadana zemixholo ngezihloko ezahlukeneyo.
Nxibelelana neengcali okanye iingcali (ezihlala zithembeke kakhulu kuba zikuvumela ukuba umisele ingxoxo ethe ngqo kwaye ucacise ukungathandabuzeki okwahlukeneyo).
Nokuba yeyiphi na indlela esikhetha ukuyibhala kusoloko kucetyiswa ukuba uthelekise amanqaku ethu Ukuya kwimithombo emininzi.
Njengenqaku lokugqibela malunga nomsebenzi wamaxwebhu, kufuneka silumkise, njengoko kubonisiwe ziincwadana ezininzi malunga nendalo yoncwadi, ukuba yinkqubo ende, etyebisayo kuba siyafunda kodwa siyadinisa ngamanye amaxesha kwaye sisitya kwabanye abaninzi kuba ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba sizimisele ukuqala Ukubhala kunye namaxwebhu kuthatha ixesha elide kwaye kudla iiyure zokuhlehlisa eyona nto imnandi, ebhalayo. Nangona kunjalo kufanelekile ukwenza oku ukukhusela ngokuchanekileyo umzuzu wokubhala kwaye ungaphazamisi ngaphezulu kokuyimfuneko ngokusetsha rhoqo, ukwazi ukugxila kuyo nokunikezela onke amandla ethu. Nokuba kunjalo, kuya kuhlala kukho amanqaku amatsha afuna amaxwebhu njengoko uqhubeka ngenoveli yakho, kodwa okumbalwa kuya kuncipha kuya kufuneka ukuphazamise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Uyibhala njani inoveli: inkqubo yamaxwebhu